यमुना अर्याल (काफ्ले) - कान्तिपुर समाचार
भर्खर नौ महिना पुगेकी छोरी घरमै छोडेर म कार्यालय जाने गर्छु । घरबाट निस्कने समय आमालाई भन्दा पहिले छोरीलाई थाहा हुन्छ । मैले लुगा लगाउन नपाउँदै उसले आफू दिनभरि छाडिने सुइँको पाइसकेकी हुन्छे । मुख अमिलो बनाउँदै फकाउन खोज्छे, ढोकासामुन्ने पुगेर थचक्क बसिदिन्छे ।
यही साता बैँकर रविना देशराजको भनाइ निकै चर्चामा रह्यो । बैँकको उच्च तहमा कार्यरत सिमित महिला मध्येकी अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड समेत हात पारिसकेकी कार्यक्षमताका हिसाबले पनि बेलाबेलामा चर्चामा आइरहने रविना यस पटक अनौठो मागका कारण चर्चामा रहिन् । उनले एक अन्तर्वार्तामा खुलेरै भनिन्, दुई तीन वटी श्रीमती राख्ने लोग्नेमान्छेलाई हाम्रो समाजले सम्मान गर्छ भने अब हामी महिलाहरुले दुई तिनवटा श्रीमान् साथमा राख्न किन नपाउने ? लोग्नेमान्छेले सानले जेठी, माइली, कान्छी श्रीमती भन्न पाउँछ भने महिलाहरुले पनि जेठो, माइलो, कान्छो श्रीमान् भन्न किन नपाउने ?
यमुना अर्याल (काफ्ले)का लेखहरु :